Sony IMX789 sensor ga-amalite na OnePlus 9 na vidiyo 4K na 120 fps | Gam akporosis
Na-atụ anya gburugburu OnePlus 9, ọ bụghịkwa n'efu. Anyị na-ekwu maka ọkọlọtọ na-esote nke onye nrụpụta ndị China, yana otu n'ime igwe atụgharị anya na nke dị elu nke afọ a. N'ezie, a ga-arụ ọrụ a na Pro dị iche iche yana, dị ka ọhụụ si adịbeghị anya, mobile nke ga-abịa dị ka OnePlus 9R.
Ekwuru na na Machị 23 ha ga ahu uzo, ma nke a ka ekwenyeghi ma ọ bụ mebie ya site na ika ahụ. N'otu aka ahụ, anyị amataworị ụfọdụ njirimara bụ isi na nkọwapụta teknụzụ nke OnePlus 9, nke nwere nnukwu ihe ịga nke ọma ga-emeghachi ọzọ ma ọ bụ obere na ngwaọrụ abụọ ndị ọzọ. Otu n'ime okwu ndị a banyere ihe mmetụta igwefoto ekwentị, nke ga-abụ Sony IMX789 ọ na-abịa na ikike ijide dị ịtụnanya.
IMX789 nke Sony, nke ga-amalite na OnePlus 9, ga-abụ otu n'ime ihe mmetụta kachasị mma maka njedebe dị elu
Vidio nkwado mbụ nke Sony IMX789 sensor bịara na ìhè, ọ bụkwa nke dị n'okpuru. Smartphone mbụ ga - eji ya ga - adị, dị ka anyị kwuru, OnePlus 9. N’okpuru, anyị ga - ahụ etu ọ ga - esi weghara agbapụ n’ụdị dị iche iche na - agbagọghị onyogho ndị ahụ na mbara obosara, were naanị 1% nke ihu a. 10-20% nke a typical aspherical oghere.
GSMArena Ọ na-akọwa ya dị ka nke a: sistemụ a na-eji igwefoto abụọ etinye na ekwentị ya na prisms abụọ na-ebugharị ọkụ na 90 Celsius. Usoro nhazi ihe onyonyo ga-esekọ ihe onyonyo n'otu oge iji mepụta panorama sara mbara nke nwere ihu 140 Celsius.
N'ihi na Sony IMX789 ga-adabere na usoro ngosi ngosi 16: 11, ọ ga-enwe ike ijide na usoro 4: 3 na 16: 9, abụọ a na-ejikarị na foto ndị a na-ahụkarị. N'otu oge ahụ, igwefoto ga-akwado usoro ihe oyiyi 12-bit RAW na Hasselblad ga-ekerịta teknụzụ ya maka oke nkenke mgbe ọ na-abịa nhazi agba. Ọ bụghị naanị na igwefoto azụ nke ngwaọrụ a ka a ga - emezi, kamakwa selfie, nwere nkọwa zuru oke karịa nke anyị nwetagoro na OnePlus 8 na igwe eji arụ ọrụ dị elu.
N'aka nke ọzọ, sistemụ autofocus ọhụrụ nwere ike rụọ ọrụ ihe ruru ugboro 10 karịa igwefoto ọdịnala; ọ na-ewe 1 millisecond maka nzaghachi dị irè. N'aka nke ya, ebe dịkarịsịrị anya gbadoro belatara ruo 15 cm (ihe dịka sentimita isii). Ihe ọzọ bụ na ekwentị na-abịa na ndekọ vidiyo na mkpebi 6K na mkpebi 4 na fps 120 (okpokolo agba kwa nke abụọ), ihe ga-ekwe omume n'ihi ihe mmetụta IMX789, nke na-abịa na ikike a na, yana ihe ndị ọzọ, nwere nhazi vidiyo HDR n'oge. ezi, abughi nwa afọ ISO, na zuru pixel omni-directional autofocus.
Ihe ndị ọzọ a kpọtụrụ aha n'elu banyere sistemụ igwefoto OnePlus 9 gụnyere quad modul, nke nwere ike ịbịa na telephoto lens. Edeela ọkụ ọkụ ọkụ abụọ na ike foto na vidiyo dị mma, ọkachasị n'ọnọdụ ọnọdụ ọkụ.
OnePlus 9 Pro gbara ọsọ
Banyere atụmatụ ndị ọzọ na nkọwapụta teknụzụ nke smartphone, a maara na OnePlus 9 ga-akụ ahịa na chipset processor Qualcomm nke Snapdragon 888, octa-core nke nwere nhazi isi na-esote: 1x Cortex-X1 na 2.84 GHz + 3x Cortex- A78 na 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz. Na mgbakwunye na nke a, RAM na nhazi oghere dị n'ime ga-esi na 8 + 128 GB gaa 12 + 256 GB.
Batrị nke ekwentị a ga-arụ ọrụ na teknụzụ ngwa ngwa nke ngwa ngwa 66 W, ebe ike ya agaghị erughị 4.500 mAh. Ihe ọzọ bụ na a ga-enwe ọdụ ụgbọ USB Type-C na nkwado maka teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa.
Ihuenyo ngwaọrụ ga-abụ nke Super AMOLED teknụzụ, ebe mkpebi ahụ, ọ bụ ezie na ekwuru na ọ nwere ike ịbụ QuadHD +, ga-anọgide na FullHD +, na-ahapụ 2K maka OnePlus 9 Pro. N'ebe a, anyị ga-enwekwa otu panel na 120 Hz nke soda.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony IMX789 sensor to first on OnePlus 9 and comes with 4K video ndekọ na 120fps